Dala, Yabelana futhi Uthinte Ama-KPIs Wakho Ebhizinisi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 3, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Enye yezingqinamba ebengihlala nginazo analytics ngukuthi abathengisi bacabanga ukuthi ukupakisha izilinganiso eziningi ngokwengeziwe kuyindlela yokuthuthukisa amapulatifomu abo. Yize kukuhle ukuba nezinkulungwane zezinto ozozibika kuzo, ukuqonda ukuthi yiziphi izinto eziguquguqukayo okunomthelela ebhizinisini lakho kunzima kakhulu. Futhi nokuqonda ukuthi yini okuguqukayo okwenzayo kucela umbuzo wokuthi ungayihambisa kanjani inaliti. Amapulatifomu we-Analytics ahlala abonakala ekhiqiza imibuzo eminingi kunezimpendulo.
Izindatshana zeTidemark yizibonisi ezenzakalayo ezixoxa indaba ngokusebenza kwenkampani. Lawa "ama-actiongraphics" ahlanganisa inqubo yakho, idatha yakho, nedatha evela ngaphandle kwezindonga zakho ukukunikeza isithombe esiphelele sebhizinisi. Zikunikeza amandla okuqonda nokuthinta impilo yakho yonke, abasebenzi bakho, kuthiwani uma ukulingisa, ukuzuza, kanye nemikhuba yokubikezela.
I-Tidemark yi-Enterprise Performance Management eyakhelwe i-Cloud. Nasi ukubuka konke:
Ngokwesayithi labo, iTidemark ihambisa izinhlelo zokuhlaziya ezenzelwe ukusheshisa ukuthunyelwa kwakho. Izicelo zabo zisebenzisa ipulatifomu yohlelo lokusebenza enamandla ngamakhono wokuphatha ukusebenza akhelwe ngaphakathi, aqinisekisa ukuthi ungalungiselela ngokushesha futhi kalula izinhlelo zethu zokusebenza kuzidingo zebhizinisi lakho.
Ukuhlela Kwezezimali - Dala amapulani nezibikezelo zokusiza ukuqhubela ibhizinisi ezinhlosweni zakho. Ukuhlelwa Kwezezimali kufaka izinqubo zokuhlelela imali, ukuhlelwa kwabasebenzi, ukuhlelwa kwezindleko zokusebenza, ukuhlelwa kwemali esetshenzisiwe, kanye ne-balance sheet nokuhlelwa kwemali, ukuqinisekisa ukuthi uthola isithombe esiphelele ngezinhlelo zakho zezezimali. Ngokusebenzisana nokuhlaziywa okungaphakathi kokuqukethwe, ungashesha ukubikezela ngezibikezelo ezintsha njengoba ibhizinisi lakho lishintsha.
Ukuhlelwa Kokusebenza - Shayela ibhizinisi lakho ngokuthwebula okokufaka kubantu abasondelene kakhulu nemikhiqizo namakhasimende. Ukuhlelwa kokusebenza kukuvumela ukuthi uqoqe abashayeli abasebenza ukuze bakhiqize izibikezelo zezimali nezinhlelo, kukuvumela ukuthi ubone lonke uhlelo lwebhizinisi. Ukuxhumanisa ukuhlela nokusebenza kwezezimali kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu enhlanganweni usebenza ngolwazi olufanayo ezinhlosweni ezifanayo.
Ukuphathwa Kwemethrikhi - Hlola ngokushesha ukusebenza kwenhlangano yakho yonke bese uthatha isinyathelo lapho kudingeka. Uhlelo lwethu lokusebenza lokuphathwa kwamamethrikhi lukuvumela ukuthi wenze ukushintshashintsha kokuhlukahluka ukuze uhlukanise izingqinamba, uqoqe imigomo yemethrikhi nama-actuals angatholakali ezinhlelweni zomthombo, sebenzisana kumongo wenqubo yakho yokuhlaziya, futhi ubuke umthelela emiphumeleni yezezimali.
Izinhlelo zokusebenza zeTidemark zabelana ngeplatifomu yohlelo lokusebenza olususelwa emafini enikezela ngohlaka lokuqinisekisa ukuthi zonke izinhlelo zethu zokusebenza zinikela ngokuqukethwe nezenzo.
Tags: amadeshiUkuphathwa Kokusebenza Kwamabhizinisikpisizindatshana zezindabaumakiizindaba zezindaba ze-tidemark
I-LeadSift: Sebenzisa Ukuthengisa Komphakathi Ukuthola Ukuhola